सोलुको गगन ‘भान्जा’लाई बधाईसंगै सुझाब छ हैः आङकाजि शेर्पा – Patrika Nepal
सोलुको गगन ‘भान्जा’लाई बधाईसंगै सुझाब छ हैः आङकाजि शेर्पा
पुष २, २०७८ शुक्रबार 41
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य आङकाजि शेर्पाले नेपाली काङग्रेसको महामन्त्रीमा विजयी भएका गगन थापालाई सोलुको भान्जा भन्दै बधाई र ६ वटा बुदामा सुझाब समेत दिएका छन ।
आङकाजि शेर्पाको गगन थापालाई ६ बुदे सुझाब
(१) गणतन्त्रको गगन छुनु (२) राजतन्त्रको घुँडा पनि नछुनु (३) २ तिहाई बहुमत प्राप्त ओली पतनबाट पाठ सिक्दै बहुमतको दम्ब कहिले प्रदर्शन नगर्नु !
(४) हिन्दुराज्य र गाईले तिम्रो मत ३० प्रतिशतमा झर्ने छ ! अतस् हिन्दुराज्य र गाई सपनामा देखे पनि बिहान उठेर चोखिनु ! (५) विद्यार्थी नेता हुन्दा त विरोधीहरूलाई सडकमा ढुङ्गाले हान्यौ ! तर पार्टी भित्र विरोधीलाई ढुङ्गा होईन फूल चढाउनु !
(६) खसहरूलाई हिन्दु वर्णाश्रमले थापा क्षेत्रीकरण गरेको सिन्जाको खसको ईतिहास पढनु र मष्ट पूजा गर्नु !
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री पदमा विजयी भएका हुन् । शेखर कोइरालाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेका थापाले सबैभन्दा बढी ३०२३ मत ल्याएर महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै, १९८४ मत ल्याउँदै दोस्रो स्थानमा रहेर विश्वप्रकाश शर्मा पनि महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भने मतपरिणामको औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ ।
प्रकाशशरण महत १५५० मतसहित तेस्रो स्थानमा रहे । प्रदीप पौडेल भने १४०९ मतसहित चौथो स्थानमा रहे। त्यस्तै मीनेन्द्र रिजालले ८०९ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै राजाराम कार्कीले १०७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैबीच मीनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । महामन्त्रीको प्रारम्भिक मतपरिणाम आएसँगै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
महत र पौडेल संस्थापन प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका हुन् भने रिजाल र थापा भने कोइराला प्यानलका उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।
त्यस्तै कार्की भने विमलेन्द्र निधिको प्यानलका उम्मेदवार हुन् । सभापतिमा पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा गएको थियो । दोस्रो चरणमा सिंह र निधिले देउवालाई समर्थन गरेका थिए ।
सभापति र उपसभापतिको भने मतगणना भइसकेको छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित भइसकेका छन् सोमबार भृकुटीमण्डपमा भएको मतदानमा कुल ४ हजार ६ सय ७९ मत खसेको थियो ।
कांग्रेसमा यसपटक सभापतिसहित १३४ पदमा निर्वाचन भएको छ ।
Prevसन्दीप लामिछानेलाई क्याप्टेन किन बनाएको ? क्यानका अध्यक्ष चन्दलाई देउवाको फोन
Next२१३ जनाले लाइसेन्सको ट्रायल दिँदा २३७ जना पास !